कालो currant देखि वाइन। व्यञ्जनहरु, समय परीक्षण
Currant अक्सर मादक पेय को तयारी को लागि प्रयोग गरिन्छ। वाइन, liqueur, ब्रान्डी , रातो सेतो र बनेको कालो currant। नुस्खा तपाईं इच्छा पेय को स्थिरता र बल प्राप्त गर्न कसरी निर्भर गर्दछ। यस लेखमा कुरा हुनेछ रक्सी, कसरी बनाउने कालो currant र केही अन्य पेय।
समय को परीक्षण र मान्छे को धेरै को लागि पहिलो नुस्खा। कालो currant देखि रक्सी तयार गर्न, जामुन को 10 किलो आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूले मार्फत जाने र combs हटाउन गर्नुपर्छ। जामुन त्यसपछि पानी (चिसो) मा धोए थिए। अर्को हामीले तिनीहरूलाई देखि रस प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, हामी एक Juicer प्रयोग गर्नुहोस्। रक्सी भएकोले शुद्ध रूप मा कालो currant धेरै tart, सबैलाई खुसी छैन भनेर, सक्नुहुन्छ यो रातो अङ्गुरको रस थप्न एक अलिकति असामान्य स्वाद संग दिन्छ। यो फल को 10 किलोग्राम लिन आवश्यक छ। को अङ्गुर देखि रस निचोड। तपाईं स्वयं यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं विशेष उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अङ्गुरको रस 30 डिग्री गर्न गरम हुनुपर्छ। त्यसपछि यो चीनी, blackcurrant रस को 500 ग्राम थप्न र राम्ररी मिश्रण। विषय मिश्रण किण्वन लागि पकाएको थियो। तपाईं एक गिलास बोतल मा खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ। को किण्वन प्रक्रिया ठीक थियो, कोठा तापमान कम से कम 25 डिग्री हुनुपर्छ। 10 दिन पछि, हामी कपास ऊन यसलाई सम्मिलित एक gauze प्रयोग गरेर अमिल्याएर रक्सी कालो currant बनाइएका फिल्टर गर्नुहोस्। एक शीशी यसलाई पोख्नुहोस्। बोतल राम्ररी rinsed र सुकेको हुनुपर्छ। आफ्नो Stoppers Clogging र तेर्सो स्थिति राखिएको।
स्वाभाविक, धेरै व्यञ्जनहरु छन्, यसको आफ्नै राम्रो प्रत्येक। यस पेय को अर्को संस्करण को तयारी को लागि, हामी currant जामुन को3किलो, चीनी को एक किलोग्राम र पानी तीन लिटर आवश्यक छ। जामुन क्रमबद्ध बाहिर ध्यान र बाला हटाउन। Currant एक धेरै नै विशेष, tart स्वाद छ। तसर्थ, हामी निकै आफ्नो बृद्धि गर्न सक्छन् जो शाखा, उन्मुक्ति। जामुन धुन र कम 8 भन्दा लिटर को कन्टेनर तिनीहरूलाई खन्याउन। अलग, तपाईं सिरप पकाउन गर्न आवश्यक छ। यो चीनी संग पानी heats सम्म यो पूर्ण भंग भएको छ। को सिरप कडा गरम छ भने, यो 25 डिग्री गर्न cooled हुनुपर्छ। हामी तिनीहरूलाई तयार currants भर्न र पाँच दिन किण्व | | खमीर लागि छोड्नुहोस्। त्यसपछि रक्सी blackcurrant फिल्टर र सानो बोतल आकार मा गिर। हामी तिनीहरूलाई clog र एक सुन्दर ठाउँमा भण्डारण मा राखे। आवश्यक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं पकाउन सकिन्छ र बलियो पेय। निम्नानुसार कालो currant को जलसेक तयार छ। जामुन को5कप, चिनी दुई कप र राम्रो वोदका को 700 एमएल लिनुहोस्। जामुन धेरै राम्रो धोए र शाखा हटाउन छन्। त्यसपछि तीन लिटर को जार मात्रा मा उनलाई भर्नुहोस्। तपाईं रस देखा भनेर, अलिकति तिनीहरूलाई समतल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चीनी तिनीहरूलाई छिडकना। हामी धेरै दिनको लागि जामुन संग बैंक आरक्षित। कहिलेकाहीं यो फल मिलाउ गर्न आवश्यक छ, रस देखियो। 2-3 दिन को अन्त मा कालो currant वोदका संग एक जार मा खन्याउन आवश्यक छ। हामी एक गाढा ठाउँमा 2-3 महिनाको लागि पेय आरक्षित। त्यसपछि फिल्टर र बोतल। कालो currant को Tincture तयार छ, तर समय यो पनि tastier बन्नेछ। जामुन पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर स्वाद कम संतृप्त हुनेछ।
blackcurrants प्राप्त मादक पेय को स्वाद, धेरै संतृप्त थिएन, रातो वा सेतो currants को एक सानो रस थप्नुहोस्। कालो currant एक बरु peculiar सुगन्ध छ, र यी घटक अलिकति उहाँलाई अवरूद्ध छन्।
Currant सामान्यतया liqueur मदिरा र पेय प्रकार तयार पारे। तपाईं पनि एक रक्सी खींचना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। वाइन ड्राई, अर्ध-मीठा र मीठो गरे। तर सधैं नागरिकहरु केही विभाग मा पिउने रक्सी contraindicated छ, र मध्यम हुनुपर्छ सम्झना।
केही व्यञ्जनहरु: कसरी खट्टा क्रीम संग zucchini खाना पकाउनु
मह-तोरी सस मा चिकन खुट्टा कसरी खाना पकाउनु?
Brizol। Mince omelette लागि नुस्खा
SDA प्रश्न: के संकेत एक बायाँ पालो निषेध?
मुख्य कार्यहरु र मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय को कार्यहरू
कसरी 4-5 वर्ष एक बच्चाहरु संग कक्षाहरू सञ्चालन गर्न?
एउटा प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ - यो एक चाल वा संयोग हो?
सबैभन्दा स्टाइलिश केश। तपाईं के केश नै गर्न सक्नुहुन्छ?